Taariikhda calaamadda Disney: taariikhda astaanta iyo qiyamkeeda shirkad ahaan | Hal-abuurka khadka tooska ah
Istuudiyaha animation-ka caanka ah ayaa had iyo jeer nala joogay, si aad u badan, taas oo noqotay xusuusta inta badan caruurteena. Taasi waa sababta maalin maalmaha ka mid ah Walt Disney uu go'aansaday inuu galo safar dheer oo calaamad u ah ka hor iyo ka dib adduunka animation.
Qoraalkan, Waxaan ku tusi doonaa taariikhda daraasaddan muhiimka ah, istuudiyo ay ka buuxaan khayaali, kartoonno, amiirro iyo amiirro, xayawaano u hadla sida dadka iyo muuqaalo sixir ah oo ka dhigay istuudiyaha ugu fiican adduunka.
1.1 Tallaabooyinka ugu horreeya ee bilawga ahaa
1.2 mashaariicda ugu horeeya
1.3 in 1925
1.4 Dhalashadii halyey
2 taariikhda astaanta
2.1 Calaamadda koowaad: Mickey Mouse
2.2 Logo labaad: qalcaddii
2.3 Calaamadda saddexaad: Disneyland
3 jardiinooyinka Disney
Walt Disney, fannaanka iyo halabuuraha animation, waxa uu ku dhashay December 5, 1901 magaalada caanka ah ee Chicago. Waxa lagu gartaa in uu yahay sawir-qaade, isaga oo u mahad-celinaya mashruucyadiisa firfircoon, muuqaalkiisu waxa uu si weyn u saameeyay bulshada Maraykanka oo uu ka adkaaday qarnigii XNUMX-aad.
Waxa uu caan ku yahay ma aha oo kaliya abuurista istuudiyaha animation-ka ugu muhiimsan adduunka, laakiin sidoo kale waa abuuraha ugu weyn ee jiirka caanka ah ee nolosha iyo farxadda siiyay daawadayaal badan oo Disney ah, caanka Mickey Mouse.
Tallaabooyinka ugu horreeya ee bilawga ahaa
Badhtamihiisii ​​oo keliya, iyo in badan ka hor inta aanu ahayn qofka aynu maanta naqaano, waxa uu caan ku ahaa in uu wargeysyada ka soo dajiyo magaalada oo uu u iibin jiray digirta jelly-ka.
Waxa dad yar ay ogyihiin in uu ka shaqeeyay oo uu wax ka qabtay arrimaha siyaasadda maadaama uu sidoo kale loo tixgeliyey daahfure sare oo taariikhi ah.
mashaariicda ugu horeeya
Sannado ka dib wuxuu u wareegay magaalada caanka ah ee Kansas, halkaas oo uu ka bilaabay inuu ka shaqeeyo waxa aan maanta u naqaanno Mickey Mouse. Kadib markii uu la kulmay dhowr qof oo ka caawiyay mashruuca, wuxuu bilaabay diyaarinta animation-kii ugu horreeyay. Mid ka mid ah wuxuu ahaa Cinderella iyo Puss in Boots.
Taariikhda Tani waxay ahayd mid aad muhiim u ah dadka jecel Mickey Mouse, tan iyo waa sanadkii uu dhashay kartoonkani iyo sidoo kale waxay ahayd 1928, saddex sano ka dib, halkaas oo uu ka soo muuqday markii ugu horeysay ee TV-ga.
Wuxuu ahaa filim gaaban oo aamusan oo madow iyo caddaan ah. Waxay ahayd guul sidan oo kale ah in sannado ka dib, ay aad u maal galiyeen kartoonnada Disney si ay u adeegsadaan saamaynta dhawaaqa. Tani waa sida sawir-gacmeedyadii ugu horreeyay ee dhawaaqa ay bilaabeen inay soo baxaan.
Dhimashadiisa ka dib, 1966, iyo ka dib markii laga helay kansarka sanbabada, waxa uu ku dhacay wadne xanuun kaas oo ka dhigay gabi ahaanba nolol la'aan. Hadda, dambaskiisu wuxuu yaallaa Beerta Xusuus-qorka ee Lawn ee Glendale, California.
Dhacdadani waxay calaamadisay ka hor iyo ka dib aduunka animation. Tan iyo markaas, istuudiyaha Disney waxaa loo yaqaan adduunka oo dhan. Waxay xitaa sameeyeen abuurista jardiinooyin mawduucyo ah oo ay booqdaan maalin kasta kumanaan iyo kumanaan qof.
Haddii aad heshay kooban kooban oo xiiso leh oo ku saabsan cidda Walt Disney ahaa iyo waxa uu u qabtay nolol. Ma seegi kartid waxa soo socda, taariikhda astaanta caanka ah.
Calaamadda koowaad: Mickey Mouse
Waa muhiim in la ogaado in calaamadii ugu horeysay ee Walt Disney ay soo baxday ka dib abuurista Mickey Mouse. Summada kowaad waxay ilaalisay sifooyinka la midka ah sida sawirka Mickey Mouse.
Astaantan waxa lagu gartaa maroojinteeda caanka ah iyo isbeddelka midabka ee shaashadaha dhammaan telefishinnada adduunka. Mickey Mouse, oo loo yiqiin sawir-gacmeedkii ugu horreeyay oo qiimo sare leh oo sumcad iyo muhiimad leh, ayaa sidoo kale ahaa astaanta ugu caansan adduunka.
Logo labaad: qalcaddii
Midda labaad way adag tahay in la xasuusto haddii aadan si buuxda u la kulmin horumarka naqshadaynta Disney. Tani waa qalcaddii caanka ahayd ee Disney. Astaantan waxa lagu gartaa muuqaal ahaan iyo muuqaal ahaanba, maadaama ay isku dayday inay ku qabato dareenka dadweynaha oo dhan iyadoo adeegsanaysa codkeeda iyo muuqaalkeeda.
Maxaa calaamad u ah calaamaddan waa, inkastoo xaqiiqda ah in ay muujinayso saxiixa qoraaga laftiisa, waxay sidoo kale muujinaysaa saameyn gaar ah oo gaar ah oo ka dhigtay qayb muhiim ah oo wakiil u ah astaanta.
Calaamadda saddexaad: Disneyland
Fikradda saxiixa iyo sawirka Mickey ma ahayn mid xiiso leh oo kaliya, laakiin sidoo kale waxay ahayd suurtagal in la soo jiito oo la abuuro beerta taas oo keentay adduun sixir ah oo lagu sii wado rumaysashada sixirka oo soo jiidata dareenka kuwa yaryar .
Taasi waa sababta calaamad aad u qurux badan oo xiiso leh ayaa loo qaabeeyey taas oo midaysay labadaba qiyamka shirkadda iyo abuurista beerta mawduuca.
Hadda waxaa jira ilaa 14 jardiinooyin oo adduunka oo dhan lagu qaybiyay:
Disney World ee Orlando oo ku taal Florida: 4 jardiinooyin mawduuc ah oo lagu magacaabo Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom iyo Hollywood Studios iyo 2 jardiinooyin biyo ah oo lagu raaxaysto xagaaga.
Disneyland ee Anaheim, oo ku taal California: 2 Parks theme oo ku yaal Ameerika.
Tokyo Disney Resort ee Tokyo, oo ku taal Japan: Waxay ku yaalliin Tokyo Disneyland iyo Tokyo DisneySea.
Disneyland, oo ku taal magaalada caanka ah ee Paris, gudaha Faransiiska: waxay leedahay 2 jardiinooyin mawduuc ah: Disneyland iyo Walt Disney Studios.
Hong Kong Disneyland iyo Shanghai Disney Resort, oo ku yaal Shiinaha.
Astaanta iyo taariikhda Disney waxay calaamadiyeen ka hor iyo ka dib xilligii animation. Ilaa iyo inta ay ku filnayd in la rumaysto sixirka iyo iyada oo la kaashanayo mala-awaal iyo hal-abuur badan, si loo abuuro wax aan horay loo abuurin.
Astaan ​​​​aan gaarin oo kaliya warbaahinta telefishinka, laakiin xitaa waxay abuurtay kanaalkeeda telefishinka, oo loogu talagalay kuwa sii wata inay rumaystaan ​​sixirka Disney iyo carruurta jecel inay daawadaan kartoonnada maalin kasta.
Taasi waa sababta haddii aad taageere u tahay Disney, waxaan kugula talineynaa inaad akhrido qoraalkan ilaa dhamaadka sidoo kale waxaan kuu soo jeedineynaa inaad sii wado raadinta macluumaadka ku saabsan Disney. Sheekadu halkan kuma dhammaanayso, maadaama xusuusta Walt Disney ay weligeed sii ahaan doonto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Taariikhda astaanta Disney